Home Wararka (Deg Deg) Guddoomiyihii Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo goor dhow la dilay
(Deg Deg) Guddoomiyihii Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun oo goor dhow la dilay
Waxaa goordhow magaalada Muqdisho lagu dilay Guddoomiyihii Degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajuun, waxaana si bareer ah u toogtay qaar ka mid ah ilaaladiisa sida MOL aay sheegeen goob joogayaal.
Lama oga sababta loo dilay Cabdixakiin Dhagajuun, wuxuuna maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray qarax laba billood ka hor uu isaga soo daweeyay dalka Turkiga.
Qaar ka mid ah ehelada marxuumka oo aan la hadalnay ayaa MOL u sheegay in dilka Cabdixakiin Dhagajuun uu ahaa shirqool, waxaayna sheegeen in aay ka war hayaan dadka ka danbeeyay shirqoolkaas.
Goobta uu ka dhaca dilka ayaa waxaa ka socda xabada culculus oo isku adeegsadeen ragga dilay Cabdixakiin Dhagajuun & ilaaladiisa qaar ka mid ah.
Waxaa goobta gaaray ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir, waxaana daqiiqado ka hor meydkiisa loo qaaday isbitaal Banaadir sida MOL loo xaqiijiyay